Kungani kukhona ukukhulelwa okuningi?
Konke kuqala ngezinto ezimbili ezilinde isikhathi eside ekuhlolweni. Kodwa isifundo sokuqala se-ultrasound sizokwandisa injabulo yakho. Ngoba kuleso siqapha uzobona ukuthi izinhliziyo ezimbili zishaya ... Noma mhlawumbe ezintathu? Indlela okuhlelwa ngayo impilo: noma yini engafaneleki kulesisindo iphakamisa ukukhathazeka. Ngakho-ke ukungabaza okuphakade kungakhathaliseki ukuthi uzobhekana kanjani, kanye nezinkulumo eziqhubekayo zodokotela mayelana nobunzima besimo sakho. Zizinakekele, thande abancane futhi ukholwe empumelelweni. Nazi amaphuzu akho asekelo! Kungani kukhona ukukhulelwa okuningi, injabulo enjalo ingena kanjani enhliziyweni yawo wonke umama?
Kubalulekile ukuqamba amanga
Ngokwemvelo, kunzima ukugqoka ingane eyodwa kunezibili (ikakhulukazi ezintathu). Kodwa ungakhohlwa ukuthi ukukhulelwa okuningi kusekhona ukukhulelwa, hhayi isifo. Ukunyakaza kwakho kusaphila! Ukugijima nokuqeqeshwa okusebenzayo kuma-simulators kukhanseliwe. Kodwa ukuhamba kuyasiza kunanini ngaphambili.
• Imikhiqizo yokudla manje igqoke othandekayo. Awukwazi ukulayisha ngaphezulu izitsha noma inhliziyo. Zonke izinsiza zomzimba wakho manje zisetshenzisiwe. Ngakho-ke, badinga ukugcwaliswa njalo. Kanjani? Ukudla okunempilo, yebo. Ukuze ugweme i-anemia, yidla inyama eningi kanye ne-offal. Ngemva kokuhlola ukuhlolwa kwegazi, udokotela angakwazi ukuhlinzekela amanye amalungiselelo ensimbi. Ukugcina inhliziyo udinga i-potassium. Kungamazambane, kuphekwe ebangeni, ubhanana, i-pin. I-folic acid iyadingeka ngemali eyengeziwe. Yiyiphi?
• Kukhona umbono ovamile: lapho abantwana besalinde umama, kuqiniswe ukuthi i-toxicosis yakhe. I-nausea kusasa yindaba yokuzalwa. Futhi kuholela emicabangweni enzima nokudla okungalungile.
• Ochwepheshe bakholelwa ukuthi uma kwenzeka ukukhulelwa okuphindaphindiwe, umzuzwana obucayi kwenzeka phakathi kweviki lama-24 neyesonto lama-28. Ngalesi sikhathi, udinga ukuziqaphela ngokukhethekile futhi uziqaphele kakhulu. Tshela udokotela konke okukukhathazayo.
• Ngendlela, mayelana nodokotela. Kuze kube sevikini lama-20 uzohlangana naye kanye ngenyanga. Khona-ke njalo njalo ngesonto. Kodwa emva kweviki lama-30 - njalo ezinsukwini eziyisikhombisa. Ungabi nobuvila ukuya kokubonisana kwabesifazane. Uyakwenza ngenxa yezingane.
Futhi nansi abahluleli
Uma, ngokukhulelwa okuvamile, isisindo sanda kusuka ku-9 kuya ku-1 kg, bese ukwandisa lesi sibalo sibe ngu-13-18, noma ngisho no-20. Umthwalo esikhumbeni awuncane. Kodwa-ke, ungagwema amanothi esondlo ngesisu nangesifuba emandleni akho.
• Ungabi ovilapha ukwenza ukusikhipha umzimba futhi usebenzise amafutha akhethekile - nansi izimo ezimbili. Faka amafutha esikhumbeni uphinde uwahlile imizuzu engu-20. Ukuphuca imoto, futhi up futhi phansi kuze isikhumba sibe omile. Ukhilimu ubuhle futhi, kepha amafutha anamafutha, okusho ukuthi kunondla isikhumba kangcono. Khetha amafutha kusuka kumanothi elula. Inqubo yenziwa ekuseni futhi kusihlwa ngemva kokugeza. Ngosuku oluthile, sebenzisa ibhande. Akufanele ucindezele, kodwa usekele isisu.
• Ngokuqondene nemithanjeni ye-varicose, kulula futhi ukuyiqinisekisa. Sebenzisa izimali ezisekelwe kuma-chestnut wamahhashi (thola ukuthi zifanele yini kumama omuso). Ungakhohlwa ngemfundo ekhethekile yokudweba igalofu. Futhi uma uphumla, faka umcamelo ngaphansi kwezinyawo zakho - ukuvimbela ukuvuvukala.
Uhlelo lwe-Classic - amaviki angu-40 - hhayi / kulabo abalinde izingane ezimbili nokuningi. Uma owesifazane enezinwele, izingane zingabonakala ngesonto 35-36 (kathathu ku-34-35). Futhi ungathathi lemigomo njengengaphambi kwesikhathi. Ukuphela kwesikhathi sokukhulelwa kungaphansi kancane.
• Kungenzeka ukuthi udokotela uzongincoma ukuya esibhedlela ngesonto elilodwa ngaphambi kosuku olulindelekile lokudiliva. Ayikho inhlekelele lapha. Ngokuphambene nalokho, ungaphansi kokuqondiswa okusheshayo kochwepheshe. Ngakho, ngezingane zonke izinto zizobe zihlelekile.
• Yenza ngokwezifiso ukubeletha kwemvelo. Isigaba sesesariya senziwa lapho abantwana bekhuluma ngokungalungile (isethulo sangasese) noma umfutho wegazi okhulelwe, ukuhluleka kwenhliziyo. Kodwa akusikho konke ngawe, akunjalo? Futhi intsha izokwazi ukulingana njengoba idinga!
• Kungadingeka ukuhlanganisa i-anesthesia ye-epidural ne-caesarean section. Kodwa ngokushesha uthatha umntwana ezandleni zakho!
Ngokwezibalo, isisindo samaphesenti singama-kilogram ayi-5, okungukuthi, ngasinye sinesisindo esingu-2.5 kg. Kodwa-ke, ngisho nokukhulelwa okukodwa, izingane eziningi zizalwa ngesisindo esincane.
• Odokotela bathi isisindo somntwana, okokuqala, sithinta ukudla komama. Iphrotheni engaphezulu kwimenyu yabesifazane, ikhudlwana ingane. Akuyona i-axiom, kodwa iqiniso elithembekile. Ngoba yiprotheni eyinhlangano yokwakha yomzimba wengane. Futhi ama-carbohydrate ayithwala amandla. Manje kubalulekile ukuthi udle ukudla okunezinhlelo zamaprotheni.
• Ubukhulu bomntwana ikakhulu buxhomeke ekuzalweni. Uma upapa mkhulu, kungenzeka ukuthi intsha izoba enkulu kakhulu. Buza umama wakho ukuthi ungubani uma uzalwa. Futhi abafowenu nodadewethu? Konke lokhu kuyathinta nesisindo sezingane ezisanda kuzalwa.
• Yiqiniso, ngokukhulelwa okuningi, ingane ngayinye umzimba ayikwazi ukukala u-4 kg. Kodwa ngokuvamile bafika ezweni elondlekile kakhulu - 3.5 kg ngalinye! Ngokungazelelwe lokhu kuyindlela yakho nje?
• Isisindo esincane sezingane akufanele sisabe noma sithukuthele. Izingane zidinga amagremu ngokushesha kakhulu. Phela, banokudla okumnandi kakhulu - ubisi lwakho. Umkhiqizo wekhalori otholwa kalula!
Cabanga ngendlela efanele. Njengoba ukwazi ukuthatha izingane ezimbili, uyakwazi ukuzondla! Zama ukungesabi, ungadluli ingxube. Njalo ubeke izingane esifubeni, uphuze ngaphezulu (kuphela hhayi ezinsukwini ezimbili zokuqala emva kokubeletha). Landela ukudla, uvikele izinsipho zakho eziqhekekeni, futhi uncelise ama-lactostasises. Futhi izingane zilala ngokuhlangene, zizoba ubufakazi obuhle kakhulu bokuthi uphumelele!
Izimpawu zokuqala zengane ezihambayo
Ukuya ocansini okungavamile kuthinta kanjani impilo yomuntu?
Izinto ezenziwe ngemfashini yabesifazane
Izibonakaliso eziyisikhombisa ezingasithandi
Unqume ukuthatha ingane yakho nawe bese ukhumbula ukuthi ...
Indlela yokuphatha igestosis kwabesifazane abakhulelwe?
Izimpawu zezifo ezehlukene zesifo somzimba
Izimo zengqondo zokuziphatha nezengqondo ukuze kuvuse isithakazelo emsebenzini
UVictoria Daineko ulungile ngenxa yemilenze yakhe egcwele, kanti uDmitry Kleiman ngemuva kokuhlukaniswa kwaba nguTimati
Izinwele zezinwele ezihamba phambili kunazo zonke zika-2015
I-Cocktail ye-Chocolate yamanzi